စက်-FLFB20-D3D မှတ်သားနေပါသည်အိတ်ဆောင် 3D Fiber လေဆာ - တရုတ်ကွမ်ကျိုး Focuslaser
စက် marking 3D ဖိုင်ဘာလေဆာ
စက် marking 2D Fiber လေဆာ
class ငါစက် lasermarking
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဂျာမဏီ IPG လေဆာ
CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း & Engaving စက်
စက်မှတ်သားနေပါသည် CO2 ပျံလေဆာ
* အက္ခရာ တင်. စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Gavlo CO2 လေဆာ
3D ခရမ်းလွန် laser အက္ခရာ တင်. စက်
စက်-FLFB20-T3D မှတ်သားနေပါသည် 3D Fiber လေဆာ
စက်-FLFB20-D3D မှတ်သားနေပါသည်အိတ်ဆောင် 3D Fiber လေဆာ
စက်-FLFB20-TG မှတ်သားနေပါသည် fiber လေဆာ
စက်-FLFB20-DA မှတ်သားနေပါသည် Auto Focus Fiber လေဆာ
စက်-FLYL30-B ကိုမှတ်သားနေပါသည် CO2 ပျံလေဆာ
သက်ဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်း: ဒါဟာကျယ်ပြန့်မိုဘိုင်းဖုန်းသော့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများ, စပလပ်စတစ်သော့, အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို, ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ် (IC), လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ, သန့်ရှင်းထည်, tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများ, ဓါး, နာရီ, မျက်မှန်, လက်ဝတ်ရတနာ, အလိုအလျောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, အိတ်များတွင်အသုံးပြု တန်ဆာ, သံမဏိထုတ်ကုန်ချက်ပြုတ်ခါးပတ်။ သက်ဆိုင်ပစ္စည်းများ: အားလုံး (ရှားပါးသတ္တုနှင့်အတူ) သတ္တုအမျိုးမျိုး, အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်, electroplating ပစ္စည်းများသည်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများပက်ဖြန်း, p ...
သက်ဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်း: ဒါဟာကျယ်ပြန့်မိုဘိုင်းဖုန်းသော့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများ, စပလပ်စတစ်သော့, အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို, ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ် (IC), လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ, သန့်ရှင်းထည်, tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသော
ဓါး, နာရီ, မျက်မှန်, လက်ဝတ်ရတနာ, အလိုအလျောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, အိတ် တန်ဆာ, သံမဏိထုတ်ကုန်ချက်ပြုတ်ခါးပတ်။
သက်ဆိုင်ပစ္စည်းများ: အားလုံး (ရှားပါးသတ္တုနှင့်အတူ) သတ္တုအမျိုးမျိုး, အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်, ပစ္စည်းများ electroplating သည်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများပက်ဖြန်း, ပလပ်စတစ်နှင့်ရော်ဘာ, epoxy စေး, ကြွေထည်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ
ထုတ်ကုန်အမည် စက်မှတ်သားနေပါသည်အိတ်ဆောင် 3D Fiber လေဆာ
ပုံစံ FL FB 20-D3D
output ပါဝါ 20W
Beam ကိုအရည်အသွေး㎡ <1.2
(ပစ္စည်းအပေါ် အခြေခံ. ) အက္ခရာ တင်. ၏အတိမ်အနက်ကို <0.3mm
operating ဗို့အား AC အ 110V / 220V 50 / 60HZ 5A
လေဆာ Wavelength 1064nm
ထွင်းထု Range 100 အ× 100mm
ထပ်ဖြစ် Precision ± 0.003mm
ထွင်းထုမြန်နှုန်း ≤8000mm / s နဲ့
ဇာတ်ကောင် Size ကို 0.5-110mm
အေးစနစ် air ကိုအအေးခံခြင်း
cable ကိုတာရှည်3မီတာ (5 သန်းနဲ့ရွေးချယ်နိုင်)
အလုပ်လုပ်အပူချိန် Range 10-30 ℃
အလုပ်အဖွဲ့စို 20% -80%
စက် Net ကအလေးချိန် 40kg
ယခင်: စက်-FL3D30 မှတ်သားနေပါသည် 3D Fiber လေဆာ
နောက်တစ်ခု: စက်-FLFB20-T3D မှတ်သားနေပါသည် 3D Fiber လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည် 20w လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည် 50w Fiber လေဆာ
Workstation နှင့်မှတ်သားနေပါသည် Desktop ကို Enclosed Fiber laser
Fiber လေဆာကြည်းတပ် Nameplate သည်စက်မှတ်သားနေပါသည်
Machinery မှတ်သားနေပါသည် Fiber လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည်ကောင်းသောစျေးအိတ်ဆောင် Fiber လေဆာ
လေဆာညွှန်မှတ်တိရိစ္ဆာန် Tag ကိုသတ္တု Nonmetal
Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့သည်စက်မှတ်သားနေပါသည် laser
ရွှေ့တဲ့ Surface တွင်မှတ်သားနေပါသည် laser
စက်မှတ်သားနေပါသည် Mini ကိုလေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည် Mopa Fiber လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည် Optical Fiber လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည်အိတ်ဆောင် 20w Fiber လေဆာ
စက်မှတ်သားနေပါသည်အိတ်ဆောင် Fiber လေဆာ
စက်-FL3D30 မှတ်သားနေပါသည် 3D Fiber လေဆာ